Ukukhanyiselwa Okukhokhelwe, Ukukhanya Kwephaneli Yokhanyayo, Ukukhanya Kokukhanya Kwolayini - Ukukhanya
Kungani Khetha Lightman
Isibani se-LED Panel
I-Edge-lit LED Panel Light
Isibani se-Panel Light se-Back-lit
I-UL & DLC LED Panel Light
Ukukhanya kwePhaneli ye-Dimmable ye-Dimmable
I-CCT Tunable LED Panel Light
Isibani sePaneli Esingenamanzi
I-RGB & RGBW & RGBWW I-LED Panel
I-Framless & Sky LED Panel Light
I-Panel Downlight Lightlight
I-Square Panel Downlight
Ingaphezulu Lendawo Panel Light Light
Isibane Esiphezulu se-LED Panel Light
I-Double color LED Panel Light
Ukukhanya kwepaneli enkulu okuholela
Isibani solayini we-LED
Kukhishwe ukukhanya kwe-Line Linear
Kumiswe ukukhanya kwe-Line Linear
Ingaphezulu Lentaba ekhanyayo ye-LED Linear
I-UVC Sterilizer Lamp
UVC-B Sterilizer isibani
I-UVC-C Sterilizer Lamp
Ifolda ye-UVC Sterilizer Wand
Handheld UVC Sterilizer Wand
I-Lipstick UVC Sterilizer Wand
I-E27 UVC Bulb
Iselula ye-UV Sterilizer
I-UVC Sterilizer Box
I-infrared Induction UVC Sterilizer Lamp
Ithoyilethi ye-UVC Sterilizer
IHhovisi Negumbi Lemihlangano
Isikole Nemfundo Yeyunivesithi
Ukunakekelwa Kwezempilo Negumbi Elihlanzekile
Isitolo sezinto ezitolo kanye nesitolo esikhulu
Gym & Indawo Yezemidlalo
Isitimela sangaphansi nesitimela
Isicelo se-Waterproof Series
Framless Series Isicelo
Isicelo se-RGB & RGBW & RGBWW
Isicelo se-Panel Downlight Series
Isibani Esikhulu Sephaneli
Kwenziwe isicelo sePanel Light Light
Umhlahlandlela wokufakwa komkhiqizo
Umenzi wesipiliyoni onolwazi lwangonyaka omude ekukhanyisweni kwepaneli okuholelekile Umkhiqizi onamandla onemigqa yomkhiqizo ophelele kunazo zonke umboza izinhlobo eziningi zamalambu wepaneli wokuhola. Umkhiqizi osezingeni eliphezulu onekhono lokuhlinzeka ngezixazululo zokukhanya eziphelele eziholwa. Umkhiqizi othembekile ohola ukwaneliseka kwamakhasimende kuze kube phakade!
IHHOVISI NOKUXHUMANA ROOM
I-Lightman yahola izibani zekhandlela elithambile nemiklamo yesimanje yesimanje yokukhanya ikhiqiza izimo ezisebenza kahle zemibandela futhi ngokusebenza kahle kwamandla, i-Lightman luminaires setha izindinganiso. Izisombululo zokukhanyisa i-Lightman zenza umsebenzi wenziwe kalula, wandise amazinga enhlala kahle emahhovisi futhi usike nezinqenqema zokusebenza.
IP65 Lightproof ye-Panel Lightp ye-IP
Isibani sepaneli ye-IP65 ye-IP yenzelwe izinhlelo zokusebenza ezindaweni ezinothuli noma ezimanzi noma ezimanzi lapho ngaphambi kwalokhu lokhu bekungenakwenzeka ngamaphaneli evamile we-LED. Ilungele izindawo ezimanzi, njengegumbi lokuhlinza, i-freezer nekhishi, igumbi lokuwasha njll. Kuhle futhi ukufeza izidingo zekamelo elihlanzekile.
I-RGBWW LED Panel Light
Ingaguqula umbala we-RGB futhi iguqule izinga lokushisa lombala kusuka kumhlophe ofudumele uye kumhlophe opholile onomsebenzi ongabonakali. Ibanga lokulawula kude elingenantambo lingafinyelela kumamitha ayi-25-30. Ukulawulwa kokuphathwa ngesandla ne-cell phone kuyatholakala. Kusetshenziswa kabanzi emidlalweni yemidlalo yeshashalazi, i-KTV, ibha, i-skating rink, ihhotela, enkulisa, indawo yokudlela, indawo yokuzijabulisa.
Isibani se-LED Linear
Ukuhluka okuhlukahlukene kokukhethwa kukho ukuhlobisa izinhlangothi nokuphelisa i-Splice engenamthungo engapheli yomklamo omude Isiliva, umbala omhlophe noma omnyama wokukhethwa kobude obungenziwa ngokwezifiso, ubukhulu be-2400mm
Round Light Panel Light
Hlanganisa ukukhanya okuphezulu kwe-LEDs engenisiwe ye-Mitsubishi PMMA LGP ye-Ultra-thin, Design elula ye-seamless kanye nokufakwa okulula kwe-vaeenty kwezicelo.
Ukuthuthukisa ukuhlanganiswa okukodwa ku-LED kungonga cishe ama- $ 7 ngenyanga.
I-LED isebenzisa amandla amancane ngaphansi kwama-85% kune-halogen no-18% ngaphansi kwe-CFL.
I-LED ifinyelela ukugqama okugcwele ngaso leso sikhathi, ngaphandle kokufiphaza noma ukufudumala.
Amandla wokuhlinzeka ngezixazululo ezikhanyayo eziholele ngokuphelele.
AC100 ~ 277V 50W Kumiswe okwesikhashana i-LED Flat Ceiling Panel Light 2 × 2
I-CE TUV 36W 300 × 600 I-LED Flat Ceiling Panel Light
Ukukhanyisa i-Indoor 60W Kuphinde kukhishwe i-LED Flat Panel Light 120 × 30
Iwaranti engu-5 yeminyaka engu-54W Isikwele se-LED Slim Ceiling Light 60x60cm
About Shenzhen Lightman
I-Shenzhen Lightman Optoelectronics Co, Ltd ibhizinisi elisezingeni eliphakeme lombuso elinezindawo eziphambili zokukhiqiza nezindawo zokuhlola ze-LED. Ngo-2012, i-Lightman imisa ifektri ye-OEM "I-LED Panel Lighting Co, Ltd." lokho kwenza i-OEM i-oda ezinkampanini zokukhanyisa zasekhaya nezakwamanye amazwe. Le nkampani ibheka ubuchwepheshe bekhanyisi yokukhanyisa iphaneli ye-LED futhi inikeza umugqa ophelele wezixazululo zokukhanyisa iphaneli ye-LED.
IHaining Building Building, iPaki Yezimboni 3, Isifunda saseGuangming, Idolobha iShenzhen, Isifundazwe saseGuangdong, 518106, PRChina
Faka ikheli lakho le-imeyili ukuthola imicimbi yakamuva ye-Metal newsand.